Baaxad u dhiganta Danmark oo ku taal Amazon waxaa loo xaraashay macdanta | Saadaasha Shabakadda
Sida taariikh murugo leh oo dhimashada la shaaciyey, dhexdeeda xaalufinta weyn ee saameysa adduunka oo dhan. Markii aan dhammaanteen la kulanno saameynta isbeddelka cimilada, wasakheynta, burburka joogtada ah ee dabeecadda ... Waxaan fahamnay wax. Ka faa'iidaysiga meeraha oo lagu beddelo lacag la cuno, waxay ku dambayn doontaa lacag la siiyo wax aan la cunin. Lacagta lama baabi'iyo, meeraha waa. Immisa xigmad ah ayaa ku jirta waxsii sheegista Hindida ee oraneysa: “Kaliya markii geedkii ugu dambeeyay la jaray; kaliya marka wabiga ugu dambeeya la sumeeyo; kaliya marka kalluunka ugu dambeeya la qabto; markaas ka dib ayaa ninka caddaanka ahi ogaan doonaa in lacagta aan la cuni karin. '
In kasta oo wax walba jiraan, haddana mararka qaarkood waxaan la kulannaa warar, oo u muuqda inay ka yimaadeen meel aysan midkoodna saameyn ku yeelan. Markan, qiyaas uu soo saaray madaxweynaha Brazil, Michel Temer. Waa kuwee? Fikirka waalan ee xaraashka qayb weyn oo kamid ah keymaha Amazon, oo u dhiganta dhammaan aagga uu dalka Danmark qabsado. Ujeeddooyinka? Macdanta dhaqaalaha ee aagga.
1 Cadaalada Brazil ayaa meesha ka saartay wareegtadii uu kor u qaaday Temer
1.1 Sidee loogu talo galay in loo fuliyo?
2 Taajirnimada Amazon, waxay ku jirtaa khatar aad u weyn
Cadaalada Brazil ayaa meesha ka saartay wareegtadii uu kor u qaaday Temer
Brazil waxay ku dhex milmeysaa geedi socod ah shirkado gaar loo leeyahay guud ahaan. Xaraashka qaybtan ka mid ah Amazon waxaa loogu talo galay inuu u noqdo gorgortan lagu galiyo xiisadda siyaasadeed ee dalka iyo kobaca dhaqaalaha. Si tartiib tartiib ah ayuu uga soo baxayaa hoos u dhaca dhaqaale, laakiin leh kobac aad u yar. Tallaabadani waxay sidoo kale ku lug lahayd soo galitaanka shirkado gaar loo leeyahay, mana ahayn muran la'aan weyn. Khubarada cilmiga deegaanka, siyaasiyiinta, deegaanka, dadyowga, ayaa ka dhawaajiyay warkan "Xaraashka sambabka meeraha".
Tallaabadan, oo la ansixiyay usbuucii la soo dhaafay, waqti dheer kuma qaadan inay gaarto maxkamadaha dalka Brazil lafteeda. Toddobaad ka dib, Arbacadii la soo dhaafay, caddaaladda Brazil ayaa hakisay go'aankii ay qaadatay dowladda Michel Temer. Muhiimadda aaggan waxay ku jirtaa ilaha macdanta ee halkaas jiifa. Copper, iron, manganese, dahab ... Aag sidoo kale aad u ballaadhan, 47.000 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Xaakimka degmada federaalka ee Brasilia wuxuu fahamsan yahay in keydka macdanta aan lagu beddeli karin ficil maamul oo fudud oo madaxweynaha ah.
Sidee loogu talo galay in loo fuliyo?
Marka aagga loo sii daayo macdanta, tallaabada xigta waxay noqoneysaa in la xaraasho shatiyada si looga faa'iidaysto shirkadaha. Dawladdu waxay xaqiijineysaa in dhammaan aagagga ilaalinta ay sii ahaan doonaan sidaas. Dhinaca mucaaradka waxay xaqiijinayaan in taas lid ku ah, 90% ee meelaha la fasaxay maxaa yeelay isticmaarkoodu wuxuu u dhigmaa aagagga waa la ilaaliyaa.
Luiz Jardim, oo ah borofisar cilmiga Juquraafiga ka dhiga Jaamacadda Gobolka ee Rio de Janeiro oo sidoo kale xubin ka ah Guddiga Qaranka ee Difaaca dhulalka ka dhanka ah Macdanta, wuxuu yiri, “Dowladdu way ogtahay in tani ay tahay aag kala duwanaansho kaladuwan oo aad loo ilaaliyo. Haddana, wuxuu muujinayaa inuu dan ka leeyahay furitaanka goobta mashaariicda waaweyn. Intaas waxaa sii dheer, wuu sii waday, «waxaan ognahay inay macdantu tahay marinka danaha kale, sida furitaanka waddooyinka, soo jiidashada geedaha dhirta ... waxay khatar ku tahay qaybahaas ilaalinta.
Taajirnimada Amazon, waxay ku jirtaa khatar aad u weyn
Amazon kaliya maahan sambabka meeraha, waxay soo saartaa 20% oksijiinka adduunka. 20% biyaha macaan ee aduunka ayaa iska leh halkaas. Mid ka mid ah 1tii nooc ee shimbiraha ah wuxuu ku dhashaa Amazon. 5% midhaha adduunka ayaa halkaas ka soo jeeda. Xitaa yaanan ka hadal cayayaanka, iyo noolaha kaladuwan ee weyn ee aan halkaas ka helno. Hantida weyn ee weyn ee weyn taasi waa.
Senator-ka Amapa, Randolfe Rodrigues, uqeexay wareegtada sida "Weerarkii ugu xumaa ee taariikhda ka dhaca Amazon." Wuxuu sidoo kale ku daray wareysiga wakaalada Reuters, “Waxaan sameyn doonaa wax walba oo aan awoodno, ficil sharci, talaabooyin sharci dejin ah, cadaadis lagu saarayo hogaamiyaasha, fanaaniinta iyo haddii loo baahdo waxaan aadeynaa baadariga«. Bil ka hor, Pope Francis wuxuu muujiyey taageero iyo ilaalin weyn Amazon iyo sidoo kale dadka asaliga ah ee ku nool halkaas, Ecuador.
Waxaan rajeyneynaa inaanan waxbadan ka ogaanin waxyeellada sidan oo kale ah. Maaha hab aad u wanaagsan oo loogu mahad celiyo kayntan quruxda badan ee wax badan ina siisay ee sii socota ee na siineysa, si looga faa’iideysto macdanta ku jirta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Baaxad u dhiganta Danmark oo ku taal Amazon ayaa loo xaraashay macdanta